Fandraisana | Ny fanafarana fiara | Manafatra fiara mankany UK
Ampidiro & Hisoratra anarana ny fiara any Angletera
Ny Fiaramanidin'ny Fiarako dia afaka mandefa, manova, manandrana ary manoratra fiara avy amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao mankany UK.
Miresaka amin'ny mpanolo-tsaina
Tambajotra mpandefa eran-tany
Tambajotran'ny mpandraharaha midadasika, manarona ny fitaterana an-tanety, ny fomba fanondranana ary ny fandefasana kaontenera any UK.
Làlana fitsapana IVA tsy miankina irery ihany
Fahaizana tsy manam-paharoa manova, mizaha toetra ary manoratra amin'ny fomba azo antoka - ao amin'ny toerantsika ihany.
Fisoratana anarana haingana DVLA
Fifandraisana DVLA natokana mba hiantohana ny fisoratana anarana mahomby sy malefaka.
Karazana fiara inona no ampidirintsika?
Mpanjifa an-jatony isam-bolana no mifidy anay hanafatra ny zava-drehetra manomboka amin'ny supercars ka hatramin'ny superminis.
Mifindra any Angletera?
Raha manana fiara mandritra ny 6 volana ianao ary monina any ivelan'ny EU mandritra ny 12 volana, dia azonao atao ny manafatra maimaimpoana ny haba amin'ny fiara. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fampiharana Transfer of Residence.
Izahay no mitantana ny fizotran'ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana amin'ny anaranao, ary mahazo antoka fa marina izany miaraka amin'ny HMRC. Izany dia miantoka ny sandan'ny VAT marina ary aloa ny adidy.
UE mankany UK?
Mifampiraharaha amin'ny HMRC izahay amin'ny fidiran'ny EU NOVA ary alao antoka fa ny fisoratanao anarana any UK dia atao amin'ny fomba mahomby sy mora tohina amin'ny fotoana.
Efa any Angletera?
Horaisinay am-pifaliana ny fanafaranao raha efa any Angletera ny fiaranao. Ny fanamboarana ny fiaranao, fanandramana ary fisoratana anarana faran'izay haingana.
Vantany vao nalefa sy voadio ny fadin-tseranana dia nandamina fitaterana azo antoka ho any amin'ny toeram-pivarotana izahay hanovana, hizaha toetra ary hanoratra ny fiaranao amin'ny làlan'i UK.
Serivisy fanafarana fiara farany-na-farany!
Inona no lazain'ireo mpanjifantsika?
Misaotra anao nikarakara ny fanafarana ny fiarako. Fantatro fa tena nanahirana manokana izany, saingy noho ny fifandraisanao dia afaka nahazo ireo faritra mety sy namaha ny olana rehetra teo noho eo sy tamin'ny fomba nahafa-po.
Misaotra betsaka anao sy ny ekipa tamin'ny fanatanterahana izany ho ahy haingana sy haingana. Raha tsara vintana aho mila manafatra fiara hafa mahafinaritra amin'ny ho avy dia azoko antoka fa hampiasa ny serivisinao indray aho.
Misaotra anao nanao asa tsara tamin'ny fitondrana ny fiaranay ho any UK ary nahavita ny fandaminana ilaina. Hiezaka izahay handefa mpanjifa any Dubai araka izay tratra.
Tonga ny takelaka, misaotra betsaka amin'ny fanampianao rehetra, nahafaly ahy ny nifampiraharaha tamin'ny orinasanao ary tsy hanana olana amin'ny fanaparitahana izany aho.
Mifandraisa anio raha mila teny nalaina manokana momba ny fanafaranao. Ny teny nindramina namboarina dia voasokajy ary ao anatin'izany ny sarany rehetra - mampiato ny risika miafina!
Manafatra sy misoratra anarana ny fiaranao any UK MIARAKA AMIN'NY VEHICLES REHETRA TANINDRAZANA
Mpanafatra fiara mpitondra any Angletera
Antony hisafidianana ny lanjan'ny fiarako:
Manam-pahaizana momba ny fanafarana fiara EU & Non-EU
Tambajotra fandefasana kaontenera manerantany
Ny lalana tokana fanandramana IVA natao manokana ho an'ny fiaran'ny mpandeha ao UK
Ekipa mpanafatra, fanandramana ary fisoratana anarana efa za-draharaha tokoa
Isan'ny varavarana mihodina haingana indrindra isaky ny orinasa any Angletera
Haingam-pandeha fisoratana anarana DVLA
Mpanaraka sy tambajotra mpiara-miasa manerantany
Amin'ny fanovana hazavana maivana sy fanomanana fanandramana fanarahan-dalàna
Ny Import Car amiko dia nanafatra fiara tany Angletera manerana an'izao tontolo izao nandritra ny 25 taona lasa. Manolotra ny mpanjifa maniry ny hanafatra fiara any UK izahay, izay safidy hafa mora azo, fa tsy maintsy raisin'izy ireo irery ny fizotrany. Izahay dia nanangana ny orinasanay amin'ny serivisy isam-baravarana matihanina izay manarona ny lafiny rehetra amin'ny fanafarana fiaranay sy hampiato ny olana mety hitranga raha tsy manana ny ekipanay hanampy anao izahay. Manana fahalalana betsaka sy antsipiriany takiana izahay mba handraisana fanapahan-kevitra hanafatra fiara any UK ho mora - eto izahay hanolotra ny vahaolana hanafarana ny fiaranao any UK.
Raha mifindra any UK ianao, mividy fiara amin'ny vanim-potoana rehetra avy any ivelany na mitondra ny fiaranao eropeana ho any amin'ny firenena, eto izahay hanampy.
Ampiasao ny fampidiran'ny fiarako ho an'ny fanafarana fiara anao ary hahazo toky ianao raha mampiasa ny orinasan-tsika manerantany amin'ny tamba-jotra, fahalalana ara-indostria ary toeram-pitsaboana tsy miankina miasa manokana IVA hampiasana anao sy ny fiaranao amin'ny lalana eto UK. .
Inona no lazain'ny mpanjifanay momba ny traikefa nanafarana ny fiarany tany Etazonia niaraka tamin'ny My Car Import?
4.5 amin'ny isa naoty kintana dimy amin'ny Trustpilot
Miankina amin'ny 6,470 hevitra
Fenoy ny fangatahana fangatahana teny nalaina ho an'ny teny nindramina fanafarana fiara namboarina.